Ukubukwa Okuhlaba umxhwele kwe-Penthouse ne-Private Terrace - I-Airbnb
Ukubukwa Okuhlaba umxhwele kwe-Penthouse ne-Private Terrace
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Marzia
Dine al fresco endaweni enelanga enesibhakabhaka esimaphakathi nedolobha njengendawo engemuva, okuhlanganisa nezikhumbuzo eziningi ezidume kakhulu zaseRoma. Ifulethi linomqondo ovulekile ovulekile futhi lisanda kuhlotshiswa ngephalethi epholile eluhlaza okwesibhakabhaka, empunga, nepinki.
“Ziphuze ingilazi yewayini ngenkathi ubuka ukushona kwelanga kanye nombono omangalisayo wedolobha usuka ethafeni lefulethi kuwumzwelo oyingqayizivele okufanele uzame.”
– Marzia, umbungazi wakho
Umbhede owusofa, umbhede we-queen, Umbhede wosana
4.91 (izibuyekezo ezingu-114)
Ifulethi lisendaweni equkethe izimangaliso eziningi zase-Rome. Kufana nemnyuziyamu evulekile enamanxiwa asendulo nezakhiwo ezinkulu. Kunemigwaqo emincane engapheli enezimakethe, abadlali basemgwaqweni, izindawo zokudlela, nezitolo zobuciko.
UMarzia Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: CVI-001409-6